फोटोशपमा पानीको रंग प्रभाव कसरी बनाउने क्रिएटिव अनलाइन
तपाईंको फोटोहरू सम्पादन गर्न र कलात्मक स्पर्श दिन फोटोशप एक उत्तम उपकरण हो। यस पोष्टमा म तपाईंलाई फोटोशपमा पानी कलर कसरी प्रभाव पार्ने भन्ने चरण-चरण सिकाउन जाँदैछु। यो धेरै सरल छ, यद्यपि यो पोर्ट्रेटको साथ राम्रोसँग काम गर्दछ, तपाईं यसलाई कुनै पनि प्रकारको तस्बिरमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई एक सुपर रचनात्मक स्पर्श दिन। यो परीक्षण गर्नुहोस्!
1 फोटोशपमा क्यानभास सिर्जना गर्नुहोस्
2 तपाइँको फोटोलाई पानीको रंगमा बदल्नको लागि तयार गर्नुहोस्
3 तह १ मा कलात्मक फिल्टर लागू गर्नुहोस्
4 दुई नयाँ समायोजन तहहरू सिर्जना गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई तह १ मा थप्नुहोस्
5 तह १ र रेखामा नयाँ लेयर मास्क सिर्जना गर्नुहोस्
6 फोटोशपमा तपाईंको वाटर कलर कलर गर्नुहोस्
फोटोशपमा क्यानभास सिर्जना गर्नुहोस्
क्यानभास सिर्जना गरेर सुरु गरौं जसमा हामी हाम्रो पानीको रंग नक्कल गर्नेछौं। "फाइल> नयाँ" मा क्लिक गर्नुहोस् वा गृह स्क्रिनमा "नयाँ सिर्जना गर्नुहोस्" बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। हामी १००० x १००० पिक्सेल कागजात, RGB रंग मोडको लागि छनौट गर्नेछौं।
एक पटक तपाईंसँग यो जानुहोस् "फिल्टर" ट्याब, शीर्ष मेनूमा, र क्लिक गर्नुहोस् "फिल्टर ग्यालरी"। एक नयाँ विन्डो खुल्नेछ जुन तपाईं फोल्डरहरूमा व्यवस्थित विभिन्न फिल्टरहरू भेट्टाउनुहुनेछ। मा जानुहोस् फोल्डर "बनावट" र "बनावट" छनौट गर्नुहोस्। दायाँ प्यानलमा, हामी कन्फिगर गर्नेछौं:
Ale 64% मा स्केल
तल्लो दायाँ प्रकाश
जब तपाईंसँग यो हुन्छ, "ठीक छ" मा थिच्नुहोस् र तपाईं आफ्नो क्यानभास तैयार छ।
तपाइँको फोटोलाई पानीको रंगमा बदल्नको लागि तयार गर्नुहोस्
छवि खोल्नुहोस् कि तपाइँ एक अलग कागजात मा रूपान्तरण गर्न चाहानुहुन्छ। हामी जाँदै छौं पृष्ठभूमि हटाउनुहोस्। प्रयोग गर्नुहोस् विषय उपकरण चयन गर्नुहोस् केटी चयन गर्न। जब तपाईंसँग यो हुन्छ, एउटा लेयर मास्क सिर्जना गर्नुहोस् माथिको छविमा संकेत गरिएको प्रतीकमा क्लिक गरेर।
यदि चयन उत्तम छैन भने चिन्ता नगर्नुहोस्, पानी रंग प्रभाव संग यो धेरै ध्यान दिएन छैन। जे होस् यदि तपाईं कालो र सेतो ब्रशको साथ चाहनुहुन्छ भने, तपाईं लेयर मास्कमा र paint लगाउन सक्नुहुन्छ ती त्रुटिहरू समाधान गर्न। मास्क लगाउनुहोस्। जब तपाईंसँग यो हुन्छ क्यान्भासमा कागजातमा केटी तान्नुहोस्। टाइप गर्नुहोस् आदेश + T (म्याक) वा ctrl + T (विन्डोज), यसलाई सार्नको लागि र यसलाई स्केल गर्नुहोस्, ताकि तपाईं यसलाई कन्फिगर गरेको खाली ठाउँमा तपाईं अनुकूल बनाउनु हुनेछ।
तह १ मा कलात्मक फिल्टर लागू गर्नुहोस्
तह १ मा हामी फिल्टर लागू गर्नेछौं। ट्याबमा जानुहोस् "फिल्टर"> "फिल्टर ग्यालरी", नयाँ विन्डोमा, "कलात्मक" फोल्डर खोल्नुहोस् र "पातलो र" "मा क्लिक गर्नुहोस्।। अर्को, दायाँ प्यानलमा, हामी कन्फिगर गर्नेछौं:
ब्रश विवरण १ 14
छाया तीव्रता ०
जब तपाईंसँग यो हुन्छ "ठीक छ" हिट.
दुई नयाँ समायोजन तहहरू सिर्जना गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई तह १ मा थप्नुहोस्
हामी जाँदै छौं नयाँ समायोजन तह सिर्जना गर्नुहोस्समायोजन तहहरू सिर्जना गर्न तपाईंले प्रतीकमा क्लिक गर्नुपर्नेछ जुन माथिको छविमा देखा पर्दछ। यो अवस्था मा, हामी ह्यू / संतृप्तिमा क्लिक गर्नेछौं। सेटिंग केवल तलको क्यापमा लागू गर्न, तह १ टाइप गर्नुहोस् आदेश + विकल्प + G (म्याक) वा नियन्त्रण + Alt + G (विन्डोज)। अब, संतृप्ति कम गर्नुहोस् - १००। सिर्जना गर्नुहोस् एक नयाँ समायोजन तह, यस समय "चमक / कन्ट्रास्ट" को लागी र केवल तह १ मा लागू गर्नुहोस्। अधिकतममा चमक बढाउनुहोस्।
तह १ र रेखामा नयाँ लेयर मास्क सिर्जना गर्नुहोस्
जब तपाईं यस बिन्दुमा पुग्नुहुन्छ, तपाईंसँग तपाईंको कलररर बनाउन सुरु गर्नका लागि सबै तयार छ। सिर्जना गर्नुहोस् लेयर १ को लागी नयाँ लेयर मास्क र कालो ब्रशको साथ तपाईले यसमाथि पेन्ट गरिरहनु भएको छ, तर तपाई कुनै प्रकारको ब्रश प्रयोग गर्नुहुन्न!
विन्डोजमा जानुहोस्, ब्रशेस। नयाँ प्यानेल खुल्नेछ। ब्रश सेटिंग्स अन्तर्गत, तपाईं असंख्य कला शैली ब्रशहरू फेला पार्नुहुनेछ जुन तपाईं अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसले पेंट स्ट्रोक र दागहरू नक्कल गर्न मद्दत गर्दछ। आकार, अस्पष्टता, आकार, र अधिक विविधताको लागि ठाउँको साथ खेल्नुहोस्।
फोटोशपमा तपाईंको वाटर कलर कलर गर्नुहोस्
जब तपाईंसँग कालो नरमको साथ तपाईंको फोटो हुन्छ, किनारहरू केही धमिलो र विभिन्न प्रकारको "स्ट्रोक" संग बढी वा कम देखिने गरी। र Apply लगाउनुहोस्। उहि ब्रशेस र उही टेक्निक प्रयोग गर्नुहोस्, केवल यस पटक कालोको सट्टा तपाईं र use प्रयोग गर्नुहुनेछ र तह मास्कमा पेन्टिंगको सट्टा तपाईं नयाँ लेयरमा रंग्नुहुनेछ जुन हामी सिर्जना गर्नेछौं र माथि राख्नेछौं।
तह सिर्जना गर्न माथिको छविमा दर्साइएको प्रतीकमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले यस प्रभावको लागि चाहानु भएको र color प्यालेट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु तपाईंले पेस्टल रंगहरू प्रयोग गर्नुहोस्। यो राम्रो देखिन्छ!
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » डिजाइन उपकरणहरू » फोटोशपमा पानीको रंग प्रभाव कसरी बनाउने
उत्तम क्षणहरू क्याप्चर गर्नुहोस् र तपाईंको फोटो प्रिन्टहरूमा यसलाई आकार दिनुहोस्
कसरी डिजिटल छवि को आकार को गणना गर्न